Umshini Wokusika we-Laser, Umshini we-Laser Engraving, Umshini weGalvo Laser - I-Laser Yegolide
SIYAKWAMUKELA UKUZE SIDLALE KAKHULU
I-GOLDEN LASER igxile ekuhlinzekeni izixazululo ze-laser ezihlakaniphile, ezidijithali nezizenzakalelayo.
Umkhiqizi wezinhlelo ze-laser zokusika, zokuqopha nokumaka. Lo chwepheshe e CO2 laser cutting umshini futhi Galvo laser umshini.
Ukusuka ekubonisaneni kokuqala kuya ekuhlolweni kwesicelo ngezinto zakho eziklanyelwe embonini ethize kuya ekuqeqesheni abasebenzisi kanye nensiza yomhlaba wonke - IGALENENSE LASER inikezela ngezisombululo eziphelele ze-laser, hhayi umshini owodwa kuphela!
IKHASI LASER LASER
UMBONO KAKHULU WOKUGULA
Umshini wokusika wejubane eliphezulu wokuzenzakalelayo we-Textile Fabric Laser
Model No: I-JMCCJG-250300LD
Umshini wokusika we-Laser we-technical Textile
Umshini wegiya wokusika i-gear & rack eliqine ngokwanele ukwenza isibalo esikhulu se-CO2 laser tube. Ikhumbula isivinini esikhulu sokusheshisa okuphezulu nesivinini sokusika nge-opics ezindizayo.
Umshini Wokusika we-Laser Format Laser for Flags, Banners, Soft Signage
Sinikezela ngezixazululo zohlelo lokusebenza ngokusekelwe kubuchwepheshe be-laser. Khetha imboni yakho: izixazululo ezifanele kakhulu ze-laser zikufanele
I-LEATHER & SHOES
Ngokuqanjwa kobuchwepheshe obuqinile, iGolden Laser iyakwazi ukuhlinzeka ngemishini ye-laser eyenziwe ngezifiso nezisombululo, yenza ukukhiqizwa kwakho kusebenza kahle futhi kube nenzuzo.
Njengomsuka wezobuchwepheshe owenza i-epoch, i-laser ithuthuka nezinzuzo ezingenakuqhathaniswa, ithatha izinqubo zendabuko ezengeziwe kanye nezinye.
I-Laser Systems Driver
Laser Systems Incwajana
Yomsebenzisi We-Laser Systems
Mayelana ne-Golden Laser (ifayela le-PDF)
Njalo hlinzeka ngokusekelwa kwensiza. Onjiniyela abatholaka izinsiza kusebenza phesheya kwezilwandle zensizakalo yokufaka, insizakalo yokuqeqesha kanye nomsebenzi wokulungisa.
Ukuthuthukiswa Kwezindiza Zangaphakathi - Izihlalo Zezindiza
Ubuchwepheshe bokucubungula i-Laser buye bukhula kancane kancane futhi busetshenziswa kabanzi ezinkampanini zezimoto, izindiza nezindwangu nezinkambu ezihlanganisiwe. Uhlelo lwe-laser luzokulethela ngokuphelele imisebenzi yokucubungula nezinzuzo ezinkulu.
Ukukhiqiza Okuhle Ngokuphakade
Umhlinzeki Wokuhola we-Laser Solutions
Inethiwekhi Yezentengiso Yomhlaba
Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engama-20 embonini ye-laser, ngokuthuthuka ngokuqhubekayo nokusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, i-GOLDEN LASER isibe ngumkhiqizi oholayo wemishini ye-laser enokwazi ukwenza ngokwezifiso okwenziwe ngokwengeziwe.
I-GOLDEN LASER ikunikeza izixazululo ze-laser zochwepheshe zomkhakha wakho wohlelo lokusebenza othize - ukukusiza ukhuphule umkhiqizo, wenze lula inqubo yokucubungula futhi wenze inzuzo engaphezulu.
Emakethe phesheya kwezilwandle, i-GOLDEN LASER isungule inethiwekhi yokuthengisa evuthiwe emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele, ngemikhiqizo yethu yokuncintisana kanye nohlelo lokuqalwa kwemakethe olususelwa kumakethe.